MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Eduardo E. Kapunan, Jr. as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Eduardo E. Kapunan, Jr. as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to the Republic of the Union of Myanmar.
He obtainedaBachelor of Science from the Philippine Military Academy, andaMaster’s degree in Management from the Asian Institute of Management.
From 1971-1977, he served in the Philippine Air Force as Senior Pilot. From 1977-1986, he served in the National Defence Intelligence Office. From 1986-1987, he served as Group Commander of Special Security and Anti-Terrorist Force of General Headquarters, Armed Forces of the Philippines. In 1987, he served as Assistant Chief of Staff for Operations of the Philippine Military Academy. From 1992-1993, he served as Consultant of the National Unification Commission(NUC). From 1993-1995, he served as Chief Operations Officer, Witness Protection Program in the Department of Justice. From 1996-1998, he served as Director of the San Miguel Foods Corporation Governing Board and Consultant of the Overseas Workers Welfare Administration (International Operations). From 2000-2002, he served as Consultant of the Office of the Presidential Adviser for the Peace Process (OPAPP). From 2002 -2005, he served as Special Assistant to the Secretary of Foreign Affairs as well as Director of Intelligence and Security Service of the Department of Foreign Affairs. From 2007-2008, he served as Assistant Secretary for the Department of Transportation and Communication. From 2008-2010, he served as Deputy Director General of the Civil Aviation Authority of the Philippines.
Dated: 11th April 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ် ခြင်းခံရသော ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ အဲဒွါဒို ကပူနန် ဂျူနီယာ အား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ဖိလစ်ပိုင်စစ်တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ အာရှစီမံ ခန့်ခွဲမှု တက္ကသိုလ် မှ စီမံခန့်ခွဲမှု(မဟာဘွဲ့) ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ ဖိလစ်ပိုင် တပ်မတော်(လေ) တွင် အကြီးတန်း လေယာဉ်မောင်း အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ် အထိ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးရုံး၌ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၇ ခုနှစ်အထိ ဖိလစ်ပိုင် တပ်မတော်၏အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အထူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အုပ်စု ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်စစ်တက္ကသိုလ်၏ စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက်စစ်ဦးစီးမှူး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ အမျိုးသား ပေါင်းစည်းရေးကော်မရှင်၏ အကြံပေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မျက်မြင်သက်သေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှိ ချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ ဆန်မီဂဲလ် စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားများ ဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အကြံပေးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ သမ္မတရုံးအကြံပေးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အထူးလက်ထောက် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏လက်ထောက်ဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ ဖိလစ်ပိုင် လေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အ‌ဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်